SKAGEN Signatur T-Bar ny smartwatch vehivavy indrindra | Androidsis
Rafa Rodríguez Ballesteros | | SmartWatch
SKAGEN dia mandefa smartwatch vaovao izay manambatra ny famolavolana sy ny haitao amin'ny fomba tsara indrindra. Ilay maodely vaovao nantsoina Tsy ampoizina ny Signatur T-Bar amin'ny fisehoana mamaky tany ao amin'ny katalaogin'ny smartwatches eny an-tsena. Fomba hafa amin'ny izay hita hatreto miaraka amina kilasy mahasarika.
Smartphone finday avo lenta izay manana ny zavatra rehetra ilainao. Saingy natao ho tanjona mazava izany. Mitondra smartwatch eny an-tsena "manify sy kanto kokoa" noho ny rehetra amin'izao fotoana izao. Raha tovovavy ianao ary tsy resy lahatra amin'ny marika rehetra noho ny endriny "marokoroko", ny SKAGEN Signatur T-Bar no famantaranandro anao.
1 SKAGEN Signatur T-Bar dia manambatra ny fomba sy ny teknolojia
2 Fantatrao ve ny atao hoe smartwatch hybrid?
3 Famantaranandro hybrid nantsoina mba hanatsara
SKAGEN Signatur T-Bar dia manambatra ny fomba sy ny teknolojia
Ny orinasa Danoa, fizarana misy ny vondrona Fossil, dia malaza amin'ny famoronana kojakoja toy ny famantaranandro, firavaka na entana vita amin'ny hoditra. Amin'ity famoahana vaovao ity, izay ampidirina tanteraka amin'ny sehatry ny haitao, dia namorona vokatra tena manokana izy io. Smartwatch hybrid izay mahavita mandanjalanja tonga lafatra eo amin'ny famolavolana sy ny fahombiazany.
Hatreto dia marina fa ny isan-jaton'ny volavola smartwatch misy isan-jato dia manana endrika masculine masculine. Ny orinasa sasany dia mandefa habe roa mitovy amin'ilay maodely, milaza ny zava-misy fa ny kely indrindra dia natao ho an'ny vehivavy. SAINGY SKAGEN dia tsy maintsy ho ilay nandray anjara tamin'ny famantaranandro marani-tsaina niaraka tamin'ny fomba vehivavy mazava tsara tamin'ny katalaoginy.
Ny hybrid SKAGEN Signatur T-Bar dia tonga miaraka a Tontolon'ny 36 mm and with 12 milimetatra matevina. ny fehy, 16 milimetatra ny sakany, dia ho hita amin'ny famaranana metaly sy hoditra. Ho hita ao amin'ny T-Bar sonia loko efatra samy hafa; volamena, volamena, volondavenona ary volafotsy. Ary hanana safidy maromaro hifanaraka amin'ireo tadiny izahay. Tsy misy isalasalana fa safidy mihoatra ny kanto izay manana ny farany.
Ny SKAGEN Signatur T-Bar dia mahatohitra rano hatramin'ny 3ATM. Na dia toy ny fanaon'ireo mpanamboatra hafa aza dia tsy soso-kevitra ny milomano miaraka aminy na misasa amin'ny ranomasina. Raiso am-pahatsorana ny hafatra, mailaka na antso fampandrenesana eo amin'ny tananao. Ho azonao atao ny manara-maso ny asanao isan'andro, manara-maso ny torimasoo ary manisa ny dianao na ny ezaka ataonao.
Fantatrao ve ny atao hoe smartwatch hybrid?
Ny famantaranandro hybrid dia karazana fifangaroana eo amin'ny famantaranandro mahazatra sy ny famantaranandro. Toy ny fitsipika ankapobeny aza asiana efijery. SAINGY afaka mahita ny fampandrenesana rehetra ao anatin'ny sehatra isika. Ny karazana fiambenana SKAGEN iray manontolo dia azo alamina amin'ny fomba isan-karazany.
Azonao atao mifantina dialy isan-karazany raha mila fampandrenesana. Manendre fampiharana na fifandraisana amin'ny isa na litera tsirairay izay miseho eo amin'ny sehatry ny, na amin'ny ampahany voatendry ho fanairana. Azonao atao koa ny misafidy ny lokon'ny fifandraisana na fampiharana hahamora kokoa ny fizahana.
Raha fintinina, ny hybrid dia famantaranandro iray izay mikendry ny hitazona ny votoatin'ny famantaranandro analogy mahazatra amin'ny alàlan'ny fampidirana teknolojia vaovao. Miaraka amin'ny fitaovana betsaka toy ny smartwatch, fifandraisana Bluetooth ary ny Fanohanana fampiharana manome ny fampahalalana rehetra amin'ny fomba malina kokoa. Ary manao izany, lojika, miaraka amin'ny fanjifana bateria tsy misy fetra.
Famantaranandro hybrid nantsoina mba hanatsara
Ireo bokotra telo ampidirin'ny SKAGEN Signature amin'ny sisiny dia azo alamina tanteraka. Omeo ny fiasa mety indrindra aminao amin'ny bokotra tsirairay. A) Ie azonao atao ny maka sary amin'ny findainao manindry amin'ny famantaranandro. NA fehezo ny famerenana mozika tsy esorinao hiala ao am-paosinao ny findainao. Fandraisana an-tariby hybrid iray amin'ny "faran'izay feno" sy feno fampiasa indrindra azonao jerena.
Ny iray amin'ireo toetra mampahomby indrindra ny besinimaro dia ny bateria. Ity smartwatch ity dia tsy miaraka amin'ny base charge, na amin'ny tariby. Tsy mila mampifandray ny famantaranandronao isan'alina ianao. Ny hybrid SKAGEN Signatur T-Bar dia mampiasa bateria azo soloina, sela bokotra mahazatra. Ary tsy hahatsiaro azy akory ianao mandritra ny volana maro.
Con rindranasa iray izay ahitanao ny angon-drakitra rehetra fivarotan'ireo fiambenana momba ny fampihetseham-batana na ny torimaso. Mifanaraka amin'ny Android sy ny iOS toy ny sisa amin'ny fanangonana fiambenana hybrid SKAGEN. Ary havaozina tsy tapaka izany mba hanomezana ny mpampiasa traikefa tsara indrindra.
Ny Signatur T-Bar vaovao dia manana fiasa vaovao ao amin'ny sehatry ny fiambenana hybrid SKAGEN. Azontsika atao ny mametraka ny fanairana sy ny fanamarihana amin'ny fotoana rehetra eo amin'ny sehatra. Afaka mampiditra fampandrenesana momba fifandraisana hatramin'ny enina ary fampiharana enina miaraka.
Raha fintinina, SKAGEN dia miloka amin'ny maodely famantaranandro hybrid miaraka amin'ny fanapahana vehivavy tena tsara. Izay hahatonga ny saribakoly hajaina indrindra tsy hahita fampandrenesana lehibe. Raha tsy tianao ara-batana ny finday finday eny an-tsena ary tafiditra amin'ny kilasika sy kanto ianao, Signatur T-Bar dia safidy tena mahaliana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » SKAGEN Signatur T-Bar ny famantaranandro fidiovana indrindra amin'ny vehivavy
Ny sambo Sony Xperia manaraka dia ho tonga miaraka amina endriny feno
Raiso ny MAZE Alpha 6 "Full HD frameless, 4GB RAM ary 64GB amin'ny € 151,19 fotsiny